Samsung weputara ohuru ohuru nke Galaxy S10 | Gam akporosis
Nwelite ohuru maka Galaxy S10 nke na-edozi nsogbu ewebata na nke gara aga site na ụbọchị gara aga
Galaxy S10 nwetara mmelite ọhụrụ nke fixes nsogbu nyere na echeta nnọọ ụnyaahụ site Samsung. Mmelite nke wetara nsogbu na Twitter na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke na-arụ ọrụ n'ọtụtụ oge.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ ọ dịla mmelite a ma ama iji meziwanye ọnọdụ abalị ahụ ewepụtara na Eprel Galaxy S10 yana maka ịgụnye nkwalite igwefoto dị ka mbugharị vidiyo ọhụụ na ụzọ dịgasị iche iche na ndị ọzọ.
Eziokwu bụ na Samsung dị ngwa iwepụta mmelite ọhụrụ a na wetara ya ihe ngwọta nye nsogbu ndị enyere na akara mkpisiaka na ihe kpatara ya na ọtụtụ mgbe ọ naghị arụ ọrụ; na-amanye onye ọrụ ịbanye PIN ma ọ bụ paswọọdụ iji jikwaa akaụntụ akụ ha ma ọ bụ nweta desktọọpụ nke ekwentị ha. N'agbanyeghị, echefula usoro kachasị mma maka Galaxy S10 +.
Ihe ohuru gunyere ike iji akụkụ sara mbara na ọnọdụ abalị ma ọ bụ ikike iji panoramas na igwefoto isi. Ihe na-atọ ọchị banyere mmelite a bụ na ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere nsogbu ndị ahụ ha nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Nke ahụ bụ, nsogbu ahụ emebeghị ka Samsung niile mechie. Anyị amaghị ihe kpatara ya na anyị amaghị ọbụna ma ọ bụrụ na Samsung edozi ha na mmelite ọhụụ ewepụtara taa.
Echere, ọ bụrụ na ọ bụ ngwa ngwa, ọ bụ na jisiri mezie na ugbu a, anyị nwere ike iwunye update enweghị nsogbu ọ bụla iji nweta ndị ndozi na a oké ekwentị; ekwentị na ọbụna na-enye anyị ohere ịgba ụgwọ na-enweghị eriri ekwentị ndị ọzọ mgbe anyị anaghị enwe ihu ọma iji isi iyi ike ọzọ.
Yabụ ọ bụrụ na inwere Galaxy S10, ị nwere ike ugbu a gaa na mmelite ịlele ma ọ bụrụ na ị nwere mmelite dịnụ ma si otú ahụ nwee mmụba ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nwelite ohuru maka Galaxy S10 nke na-edozi nsogbu ewebata na nke gara aga site na ụbọchị gara aga
Otu esi eme ka AOD rụọ ọrụ mgbe ị nwetara ọkwa na Samsung Galaxy S10 gị
Anyị amatalarị batrị nke Samsung Galaxy Note 10 dị ọnụ ala ga-adị